Malunga nathi -I-GUODA (Tianjin) inzululwazi kunye nophuhliso lwetekhnoloji Inc.
Ingcali ekwenziweni kweebhayisikile kunye norhwebo, GUODA(Tianjin) inzululwazi kunye nophuhliso lwetekhnoloji Inc. ivelisa zonke iintlobo zeebhayisekile, kubandakanya ibhayisekile yombane kunye nebhayisikile enamavili amathathu, isithuthuthu sombane kunye nesithuthuthu, abantwana ibhayisekile kunye neenqwelwana zabantwana, kukhangelwa amava abhetele okukhwela kubomi bemihla ngemihla. Ngo-2007, sizibophelele ukuvula umzi-mveliso wobungcali ukwenza ibhayisekile yombane. Ngo-2014, i-GUODA Inc. yasekwa ngokusesikweni eTianjin, esona sixeko sikhulu sesibuko sorhwebo lwangaphandle kumantla e-China. Kwi-2018, ephefumlelwe "yi-Belt kunye neNdlela yokuQala" Ie "I-Silk Road Economic Belt kunye ne-21-Century Maritime Silk Road", i-GUODA (Africa) Limited yasekwa ukuze iphonononge ngakumbi kwintengiso yamanye amazwe. Ngoku, iimveliso zethu zifezekisa ukuthandwa okukhulu ekhaya nakumazwe aphesheya.
Sinqwenela ukuba liqabane lakho elithembekileyo kwishishini kunye nokwenza impumelelo kunye nokuphumelela kwikamva eliqaqambileyo!